Entry level ထုတ်လုပ်မှု NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » entry level ကိုထုတ်လုပ်မှု
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Entry 'အဆင့်ထုတ်လုပ်မှု
ရာထူး: entry level ကိုထုတ်လုပ်မှု
Location: Philadelphia တွင် PA US
ရုံဘွဲ့ရ? သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုအခြိနျပိုငျးသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ရှာဖွေနေပါသလား သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Build?
* အယ်ဒီတာများ (အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် Premiere / နောက်ဆုံးဖြတ် /)
* တွင်-cam (စတူဒီယိုအင်တာဗျူး)
* ထုတ်လုပ်သူများ (စတူဒီယို / လယ်ကိုအပိုင်းပိုင်း)
* သင့်သောဗီဒီယိုအလုပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ link ကိုပေးပို့ပါ။
သတင်းထုတ်လုပ်သူ AM Newscast - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
Medic / Covid လိုက်နာကျင့်သုံးမှုအရာရှိကိုသတ်မှတ်ပါ - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
သတင်းဓာတ်ပုံဆရာ - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
လှံ & Arrows 2018-02-28
ယခင်: စတူဒီယို / ထုတ်လုပ်ခြင်း International
နောက်တစ်ခု: ပထမဦးစွာ SMPTE Specification ၏မူကြမ်းကယ်ယူမှရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက် SMPTE နှင့်ပီပီပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်